Ciidamada nabad-sugidda Jubbaland oo gacanta ku dhigay walxaha qarxa iyo raggii waday | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidamada nabad-sugidda Jubbaland oo gacanta ku dhigay walxaha qarxa iyo raggii waday
Ciidamada nabad-sugidda Jubbaland oo gacanta ku dhigay walxaha qarxa iyo raggii waday
Ciidamada nabadsugidda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kusoo bandhigay ilaa sedex nooc oo Miino ah in nin ay ciidamadu sheegeen in lagu soo qabtay walxahan qarxa.
Madaxa danbi barista nabadsugidda Jubbaland COL Axmed Muuse Xirsi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ninkan iyo nin kale oo hadda isbitalka yaal ay ciidamadu kasoo qabteen duleedka galbeed ee magaalada, ayaga oo sitay Miinooyin sedex ah.
Waxaa uu sheegay in labada nin oo Miinooyinka ku siday Jawaan mid kamid ah uu soo gaaray dhaawac intuu uu howlgalku socday, midna uu bad-qabo, isagoo sheegay in miinooyinkan ay doonayeen in ay shacabka ku wax-yeeleeyeen bisha barakeeysan ee Ramadaan.
Madaxa danbi barista ayaa intaa ku daray in ay socdaan baaritaanno ku aadan fal danbiyeedka lagu soo qabtay raggan.
Waxa uu ugu baaqay shacabka reer Jubbalad in ay la shaqeeyaan ciidanka, sida looga hortago falal amni darro oo ka dhaca Jubbaland.
Maleeyshiyaadka Al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa aalaaba marka la gaaro bisha Ramadaan waxa ay laba jibaaraan weerarrada, waxaana taa badalkeeda ay ciidamada kala duwan ee dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada la geliyaan heegan si ay uga hortagaan weerarrada Al-shabaab.